Ungavumeli AmaBots Akhulume Ngomkhiqizo Wakho! | Martech Zone
U-Alexa, umsizi womuntu osebenza ngezwi onamandla we-Amazon, angashayela ngaphezu kwe $ 10 billion emalini engenayo eminyakeni embalwa nje. Ekuqaleni kukaJanuwari, iGoogle ithe ithengise ngaphezu kuka- 6 abayizigidi ezingu Amadivayisi we-Google Home kusukela maphakathi no-Okthoba. Ama-bots womsizi afana ne-Alexa ne-Hey Google aba yinto ebalulekile empilweni yesimanje, futhi lokho kunikeza ithuba elimangalisayo lemikhiqizo yokuxhumana namakhasimende kungxenyekazi entsha.
Belangazelela ukwamukela lelo thuba, imikhiqizo iyashesha ukubeka okuqukethwe kwayo kuzingxenyekazi eziqhutshwa ukusesha ngezwi. Kuhle kubo - ukungena esitezi esiphansi ngamapulatifomu ezwi kunengqondo kakhulu, njengoba nje nokwenza iwebhusayithi yezentengiselwano kwaba nengqondo ngo-1995. Kepha ngokuxhamazela kwabo, izinkampani eziningi kakhulu zishiya izwi lomkhiqizo wazo (nedatha yesikhulumi sezwi ehlobene nayo) ezandleni zebhizinisi lomuntu wesithathu.
Lokho kungaba iphutha eliyinhlekelele. Cabanga nge-inthanethi lapho wonke amawebhusayithi emnyama nomhlophe, abekwe kukholamu eyodwa futhi wonke amasayithi asebenzisa ifonti efanayo. Akukho okwakuzogqama. Awekho amasayithi akhombisa ukubukeka nokuzizwa kwemikhiqizo ayimele, ngakho-ke amakhasimende angathola umuzwa ongahambelani lapho esebenzisana nemikhiqizo kwamanye amapulatifomu. Kungaba yinhlekelele evela kumbono wokubeka uphawu, akunjalo?
Okuthile okunjalo kuyenzeka lapho izinkampani zihlanganisa ndawonye isicelo sabasizi babantu abanikwe amandla ngezwi ngaphandle kokudala nokuvikela izwi lomkhiqizo elihlukile. Ngenhlanhla, akudingeki kube njalo. Esikhundleni sokunikeza ama-bots womsizi ukulawula izwi lakho lomkhiqizo, ungazakhela owakho on-brand, isu lokuxhumana elinikwe amandla i-AI ngohlelo lokusebenza olwenzelwe ukuxhumana ngezwi okuhamba phambili.
Akudingeki wakhe isoftware yezwi kusuka phansi ukuze ikwenze kwenzeke - kunezixazululo zezingxoxo ezinikwe amandla i-API, eziqhutshwa yidatha ezikuvumela ukuthi ukhulume namakhasimende noma ngabe ukuphi - ocingweni, ezinkundleni zokuxhumana, ku iwindi lokuxoxa noma emakhaya abo nge-bots bots. Ngendlela elungile, ungaqiniseka ukuthi lezi zingxoxo ziyafana futhi ziku-brand ngaso sonke isikhathi.
Abathengisi abahamba phambili njengamanje basebenzisa leli qhinga ukuphatha izingxoxo namakhasimende ngama-bots asizayo, ukuhlinzeka ngezimpendulo emibuzweni yamakhasimende ngokutholakala komkhiqizo noma ukulethwa. Izinkampani zemishwalense zisebenzisa izwi ukuphendula imibuzo emayelana nezinzuzo zokuqashwa kwezimoto ngenkathi kulungiswa izimoto zamakhasimende. Amabhange asebenzisa amapulatifomu ezwi ukusetha nokushintsha ama-aphoyintimenti namakhasimende.
Ngesisombululo sezwi esifanele kanye nemininingwane esesikhathini, ungaqiniseka ukuthi idatha yamakhasimende isetshenziswe ngokunembile ukudala ukuxhumana namakhasimende. Futhi lapho ulawula izwi lomkhiqizo wakho kuzingxenyekazi zomsizi we-AI, uzokwazi nokuhlanganisa idatha kusuka kokuthengiselana ngezwi kuhlelo lweCRM yenkampani yakho. Lokho kuzobaluleka ngokwengeziwe njengoba abathengi abaningi benza ukusesha ngezwi.
Umhlaziyi wezimboni ozimele uGartner ukubikezela lokho 30 amaphesenti Ukuphequlula kuzokwenziwa ngaphandle kwezikrini ngo-2020, njengoba ukuphequlula ngezwi kuqala ngamadivayisi afana nezingcingo nabasizi be-AI kutholakala ekusesheni okususelwa embhalweni. Ngabe inkampani yakho ingakwazi yini ukulahla umkhondo waleyo datha - noma ivumele ukuthi ilawulwe yi-bot yomuntu wesithathu? Ngokulawula ngokuqinile izwi lomkhiqizo wakho, nawe ungagcina ukulawula kwedatha yakho.
Njengoba abasizi bezwi besingatha ukuthengiselana okuningi phakathi kwemikhiqizo namakhasimende, ubungozi ezinkampanini ezibeka izwi lazo lomkhiqizo kuma-bots womuntu wesithathu buya ngokusobala. Inani lomkhiqizo liyahlanjululwa lapho izwi lingaguquguquki kuzo zonke iziteshi, futhi ukuthembela kwamakhasimende kwenziwa buthaka. Ukulahleka kwedatha kusho ukuthi imikhiqizo ayikwazi ukudala amaphrofayili wamakhasimende aphelele futhi anembile.
Abaholi bezinkampani abagxile esikhathini esizayo bayaziqonda izigxobo, yingakho bejahe ukudala ubukhona besikhulumi sezwi. Ukulangazelela kwabo ukwamukela amapulatifomu kunengqondo. Kepha kubalulekile ukudala isu elivikela ubuqotho bomkhiqizo. Uma inkampani yakho ihlela ukuxoxa namakhasimende ngabasizi babo bezwi, qiniseka ukuthi awuvumeli ama-bots ukuthi akukhulumele.
Tags: alexabotizwi lomkhiqizoUkufaka uphawuizwi